Nhungamiro yaKarman Yakazara yekushandisa Wiricheya | Karman® Mawiricheya
sei chakakosha kuti uve nechokwadi chekuti uri kushandisa wiricheya nemazvo?
Mhinduro yacho chaizvo zvakakosha yekushandisa wiricheya! Iwe haudi kukuvara kana kukuvara. Saka rega kutanga izvozvi. Mawiricheya vari vaviri mhando zvakaita se bhuku (rekuzvifambisa) uye magetsi (simba). Kune mamwewo akakosha masheya evana anowanikwa akaenzana zvinoenderana kuti ashandiswe nevana vadiki. Iri ibasa renyanzvi yehutano kukurudzira a mavhiripu sezvavanogona kuziva iyo mhando yepamusoro of wiricheya kusangana nemurwere uye zvemhuri zvinodiwa.
Mawiricheya, senge chero imwe kufamba aids, inogona kuwedzera kuzvimiririra uye kugadzirisa iyo unhu yehupenyu kune vese varwere pamwe nemhuri. Kufanana nezvimwe kufamba aids, kune zvekare nzira chaiyo yekushandisa a wiricheya. Kana chigaro chevhiri chikashandiswa zvisirizvo, mushandisi haakwanise kutora mukana wakazara wezvese zviitwa uye maficha. Izvo zvinogona zvakare kutungamira kumatambudziko, zvichikonzera tsaona kana isingatarisirwe kuipa. Tarisa kure neichi kutanga kwe hupenyu hune utano.
Nekudaro, kune akati wandei matipi ekuchengetedza aunofanirwa kuziva uye kushandisa ayo ari epasirese. Yedu yanhasi zvinhu yakazvipira kune aya matipi. Tinoda kukupa gwara rakazara rekuti ungashandisa sei cheya cheya zvakachengeteka. Pazasi, iwe unowana makuru matipi ekuchengeta mundangariro, kutevera, uye kushandisa. Izvo zvakakosha kuti iwe uchengete aya matipi ekuchengetedza mupfungwa dzako pane zvinomanikidzwa uye kunyangwe zvodii mhando chese vhiri cheya iwe urimo kana kunyangwe iwe uine mumwe munhu anowanzo kufamba newe.
Mashandisiro Aungaita A wiricheya
Wana Kujairana neako wiricheya
Kuwana nzvimbo yako yekunyaradza muwiricheya yako
Mawiricheya huuya mumhando dzakasiyana uye saizi. Usati watanga, dzidza nezve iyo yaunayo. Dzakati wandei mhando yemacheya mavhiri ane zvakare akasiyana kutonga pamwe chete nenhumbi kubatsira mushandisi kufamba-famba.
Verenga kumusoro Wako wiricheya's Instruction Chinyorwa Kuti Uwane Mabhureki Awo
Zvikamu zvakakosha zvechigaro chevhiri mabhureki. Vanokutendera kuti umire kana uchinge wasvika kwauri kuenda, uyezve vanochengeta cheya cheya yakatenderera kuti mushandisi akwanise kupinda nekubuda mairi. Mune chigaro chevhiri, pane kazhinji mabhureki emabhureki uye mabhureki ekupaka.
Mabhureki emabhureki anowanzovapo pamativi evhiri ese, uye anoshandiswa kumisa cheya cheyairi kuti isafambe nekukwevera pasi. Bhureki yekupaka, kune rumwe rutivi, iri chitiviri chakaitwa, uye iwe unogona kusunda pane chitiviri kuti chiitwe.
Tarisa uone Wiricheya yako Chigaro uye Backrest
Usati washandisa wiricheya yako, zvine hungwaru kuona kuti ndiyo sarudzo yakasununguka kwazvo kwauri. Macheya mavhiri anowanzo kuve nemakusheni pachigaro pamwe necheshure kumashure, asi ungangoda kuita dzimwe shanduko kuti iwedzere kugadzikana, sekunge iwe ungangoda kuwedzera mamwe makushingi ku kusunda iwe kumusoro kana pamwe jira rekuisa pamusoro pechigaro chinotonhora.
Zvishandiso izvo zvinoshandiswa kugadzira wiricheya chigaro chinogona kuve chemachira anochinjika kana huni yakasimba.
Kana iwe uri kutarisana nedambudziko rekugara wakamira, saka unofanirwa kutsvaga mamwe macushion ekuwedzera pachigaro kana kubackrest kuti ugare pachinzvimbo chinokutendera iwe kuti usvike kumatongero aunoda.
Kugara Pasi Mu wiricheya
Vhura Mabhureki Ako
Usati watanga kutenderera, uchafanirwa kupinda mune yako wiricheya. Kutanga, ita shuwa kuti mabhureki ako avhurwa nekutarisa mativi emavhiri ako kana nekutsikirira bhureki rekubvarura. Izvi zviri kuzoona kuti yako wiricheya unoramba wakamira zvakamira sezvaunopinda mairi.
Kumisikidza Hwako tsoka dzako kuSides
Inesarudzo Kukwidza Legrests
Tsoka dzetsoka dziripo pazasi pechikamu che wiricheya. Ivo anoshandiswa kuzorora tsoka dzako pawakagara. Usati wapinda mu wiricheya, uchafanirwa kuisa tsoka dzako kure. Iwe unogona kana kupeta kana kuchinjisa ivo zvichienderana ne wiricheya.
Bata zvigaro zvemaoko nemaoko ako maviri uye edza kugara pasi pachigaro zvishoma nezvishoma.
Isa Tsoka Dzako paPlate Yetsoka
Mushure mekunge mazviwisira pachigaro uye mave kugadzikana, unogona kumbopeta kana kupeta hwashu tsoka dzidzokere panzvimbo kuti dzizorodze tsoka dzako padziri.
Kufambisa a Manual Wiricheya
Kuenda kumberi mu wiricheya
Kuti uzvifambise iwe wiricheya kumberi, bata iyo wiricheya ruoko marimu aripo padyo nekuseri kwe wiricheya. Vasundire kumberi pamwe nekudzika pamarimu emaoko, wobva warega. Dzosera maoko ako kumashure kune kwawakatanga uye dzokorora zviya.
Kutendeuka a wiricheya
Kutendeuka wiricheya kurudyi, sundira kumberi kuruboshwe-rimu kuti ufambise vhiri reruboshwe kumberi sezvaunononoka kana kumisa vhiri rerudyi. Kutendeuka wiricheya yasara, fambisa vhiri rerudyi kumberi sezvaunomira wakamira kana kudzora vhiri reruboshwe.
Kudzokera kumashure mu wiricheya
Zvekudzokera kumashure, bata maoko marimu ari padyo nepamberi kwechigaro. kusunda ivo kumashure uye pasi kufambisa mavhiri kumashure.
Kumisa a wiricheya
Kumisa iyo wiricheya, bata marimu emaoko, uye shandisa kupesana kunonoka. Kana marimu emaoko akanyorova, saka panzvimbo pawo, tsinya vhiri. Iva wakangwarira, sezvo kukakavara uku kuchikonzera kupisa kunogona kupisa maoko ako, kunyanya kana iwe uri padanho kana kuti unofanira kumira kamwe kamwe.
Kumira Kumira Kubva PaWiricheya
Svika pedyo nechigaro kana mubhedha
Kuti ubude, tanga, zvimise padyo nechigaro kana mubhedha.
Kiya mabhureki kumativi ese
Kunge paunogara mu wiricheya, yakafanana neiyo paunobuda mairi, inofanira kunge yakanyarara. Saka kiya mabhureki emabhureki kumashure kuti ave nechokwadi chekuti mavhiri anoramba akamira.
Bvisa tsoka dzako pachitsiko chetsoka
Svetuka kana peta tsoka dzetsoka munzira yekuzorora tsoka dzako pasi.
Isa maoko ako pazviwoko zvese zvemaoko sezvaunotsamira kumberi
Zvishoma nezvishoma simuka kubva ku wiricheya nekubata mawrestrests nemaoko maviri. Zvichienderana neyako kuipa, unogona zvinoda mumwe munhu kuti ikubatsire kubuda mu wiricheya zvakachengeteka uye panzvimbo yekuzorora.
Kuwedzera Pressure Maronda uye Blister Kudzivirira Tips
Varwere, pamwe nemhuri, vanofanirwa kutsvaga mablister uye maronda ekumanikidza anogona kuitika kubva pakushandisa iyo wiricheya. Vashandisi vanozvifambisa ivo wiricheya inogona kubuda ine mablister pamaoko avo kubva mukukakavadzana kusingagumi kurwisa marimu emaoko. Vamwe wiricheya vashandisi vanopfeka magurovhosi kuchengetedza maoko avo. Kune vashandisi venguva refu, ergonomic ruoko marimu akaratidzira kune kunatsiridza nyaradzo pamwe nekuderedza kushungurudzika.
Karman Manual Mawiricheya
Kugara mu wiricheya kwenguva yakareba inogona zvakare kukonzera kumanikidza maronda. Vanogona kukura chero nguva yekubatana pakati peganda nechigaro chepamusoro. Varwere vasinganyanyi kufamba uye vanowanzo gara munzvimbo imwechete vanowanzova panjodzi huru.
Kutarisa ganda nguva dzose kune mablisters kana maronda zvakakosha. Ita shuwa yekurega chiremba azive nezve chero shanduko yeganda. Kunyanya kutarisirwa kungave kunodiwa kune vana vanorapwa mhedzisiro senge matambudziko eganda, kukuvara kwemitsipa, kana kuwedzera njodzi yehutachiona.
Pamusoro pekumanikidzwa, yeuka izvi zvese wiricheya mazano ekuchengetedza. Uye usakanganwe kuti ese aya matipi anongova akajairika pamwe neakakosha. Sezvo nguva inopfuura, iwe unowana zvimwe zvimwe zvipingaidzo kune yako isina-kufamba-kukwira; zvakadaro, havafanirwe kukudzikisira.
Isu tinokurudzirawo kuti iwe ubvunze mibvunzo yako kuti ive yakachengeteka wiricheya kushandiswa paunotenga yako wiricheya sezvo mugadziri achigara achiziva akanakisa matipi ekukusangana nawo.